Book | သင်ကာဘုန်းမြင့်-Thinker Bhone Myint
June 13, 2016 · 2:33 pm
ဒေါ်ဓမ္မစာရီ၊ ဦးမောင်ကြီး နဲ့ ထေရီထေရာ ဘာသာပြန်
(Credit – Dhamma Stream)
နေ့လည်က ရာပြည့် YarPyae Book စာအုပ်တိုက် မုခစာအုပ်မှာ လယ်တီ ပဏ္ဍိတ ဦးမောင်ကြီးရဲ့ ထေရီဘာသာပြန် ငါးတွဲပေါင်းချုပ် ထွက်မယ်လို့ တွေ့လိုက်တယ် …
အဲဒါနဲ့ ဆက်စပ်လို့ ဖတ်မိတာလေး မျှဦးမယ် … သစ္စာဝါဒီဋီကာ ကျမ်းပြု သီလရှင်ကြီး ဒေါ်ဓမ္မစာရီ (မင်းကွန်း) ဟာ သီလရှင် မယ်ကင်း၊ မယ်နတ်ပေးတို့ အဆက်၊ မင်းကွန်းဆရာတော် ဘုရားကြီးရဲ့ သာသနာမိခင်ကြီးလည်း ဖြစ်တယ် …
ဒေါ်ဓမ္မစာရီက ဦးမောင်ကြီးနဲ့ သက္ကတဘာသာ စာသင်ဘက် … ထေရီထေရာ ဘာသာပြန်ကို ရေးဖို့ တိုက်တွန်းတာက လယ်တီ ပဏ္ဍိတ လူထွက် … ဒေါ်ဓမ္မစာရီက စာချရတာနဲ့ မအားလို့ လယ်တီ ပဏ္ဍိတက ရေးတာ …
လယ်တီ ပဏ္ဍိတရဲ့ ကလောင်အမည် မန္တလေး ခင်တုတ်ဆိုတာ ဒေါ်ဓမ္မစာရီရဲ့ လူအမည် တုတ်တုတ်ကို ယူထားတာ …
Filed under Book, Reading Notes, Religion, Uncategorized
Tagged as Book, Reading Notes, Religion
June 1, 2016 · 3:32 pm
လွန်ခဲ့တဲ့ ၇၅ နှစ်ကျော် ၈၀ ဝန်းကျင်လောက်တုန်းက ဦးဗဂျီငိုရေးပြီး အခမဲ့ဝေတဲ့ “သတင်းစာဆရာနှင့် သတင်းထောက်” စာအုပ်ငယ် … (မအဲ စာအုပ်ဗီရိုထဲမှ …)
Filed under Book, Journalism, Uncategorized
Tagged as Book, Journalism
May 10, 2016 · 3:24 pm
Defiant Humor – Harn Lay
ကိုဟန်လေး ကာတွန်းများ စုစည်းမှု ဒုတိယအကြိမ် …
Filed under Book, Uncategorized
May 9, 2016 · 3:20 pm
Frame-less Art Show
Think ဂယ်လာရီမှာ Thinker ရေးတဲ့ Thinking စရာ ပန်းချီကား ၂ ကား တင်မည် … Think ချင်ရင် Think ကို ကြွပါ … 😀
February 18, 2015 · 12:15 pm
Light on Pāḷi Pronunciation
Light on Grammar
နိရုတ္တိ ဒီပနီ၊ နိဿ ယ နံကျဉ်း
Filed under Book, e-Book, Literature
Tagged as Book, e-Book, Literature
April 29, 2013 · 7:38 pm
မောင်သာရ ဝတ္ထုရှည် စာရင်း
(ဓာတ်ပုံ – မိုးမခ)
ရုံးမှာ စကားစပ်မိလို့ ပြောကြရင်း ဆရာ မောင်သာရ ဝတ္ထု ခေါင်းစဉ်တွေ “ရှ” ပုံကို ရောက်သွားတယ်။ မှတ်မိသလောက် ရွတ်တာတွေ ချရေးလိုက်တယ်။ ကိုနေကိုဦး (https://www.facebook.com/nayko.oo) က စနစ်တကျ ပြန်စီထားလို့ မှတ်တမ်းတင်ထားလိုက်တယ်။
1. မျိုးမမ ပကာသနီ
2. လမ်း၌တွေ့သော သစ်ပင်တပင်
3. လှသည်၊ လွယ်သည်၊ သို့သော် လည်သည်
4. ချစ်သူကနေ့၊ ကိုယ်က ည
5. မောင်သိန်းလွင်၏ မစန်းစန်းဝင့်
6. ထဘီကျွတ်၍ လွှတ်လိုက်မည်
7. တယောက်မျက်နှာ တယောက်ကြည့်ကာ
8. မြည်းတကောင်နှင့် သားအဖနှစ်ယောက်
9. မကူးသောငါး၊ မနားသော ငှက်
10. မတ်တပ်ရပ်လို့ လမ်းမှာငို
11. ရွှေစော်နံ ပြန်လိုက်ဦး
13. ကတ္တီပါဖိနပ်စီး ရွှေထီးဆောင်း
14. အရုပ်မျက်နှာ ပန်းမျက်နှာ
15. သူ့အယင်က တယောက်၊ သူက တစ်ယောက်
16. ပြန်မပြောရင် ပြောချင်တယ်
17. အထက်တဝက် အောက်တဝက်
18. စီးပလေစေ မောင်မသုတ်နဲ့
19. အသနက်မ အောင်လံကြီးထူ
20. ကျဉ်တုတ်ခံဝံ့ မခံဝံ့
21. အမေက ငယ်သေးတယ်တဲ့ရှင်
22. ရင်ခုန်သံ နည်းနည်းမြန်သည် (ပ၊ဒု)
23. ခါးတကယ်မတို့ခင်က ယားတယ်လို့တွန့်
24. ဝဋ်လိုက်တတ်တယ် မောင်မောင်သတိထား
25. ယုန်နှင့်အတူပြေး၊ ခွေးနှင့်အတူလိုက်
26. ရှင်ဘုရင်နဲ့ညားရင် မိဖုရား
27. ဂူတဂူထဲ ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်
28. ကြောင်ကို ဘယ်သူ ခြူဆွဲပေးမလဲ
29. မငိုရဘူး မရယ်ရဘူး
30. မနှတ်လောက်တော့ တဆယ်ချေး
31. ပြောပြန်ရင်လဲ မောင်သာရ လွန်ရာကျမယ်
32. ငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် မကြုံကြိုက်လို (ပ၊ဒု)
33. နက်ဖြန်မှဖြစ်မှာ လာမပြောနဲ့
34. မချစ်ပြန်ရင်လဲ အားနာစရာ
35. သုမနကျောမှာ ဒဏ်ရာတွေနဲ့
36. ဇီးကွက်ရုပ် အသည်းနှလုံး
37. ရွာငယ် ဇနပုဒ် မီးကလေး မှိတ်တုပ် ( မိုးမိုး အင်းလျား၏ ပန်းရိုင်းတရာနှင့် ပူးတွဲ)
38. လှမျက်ခြယ် ရာ့သက်ဝယ်ဘယ်မမုန်းပြီဘု
39. နောက်ဆုံးတော့ ကျော်ဟိန်းက ကျော်ဟိန်းပါပဲ
40. ငရုတ်မှန်လျှင် စပ်ရလိမ့်မည်
41. မောင် ….သူက ဘယ်သူလဲဟင်
42. ပုစွန်တောင် ကြည့်မြင်တိုင်သူနဲ့ မန္တလေး မြို့တော်သူ
43. ပြုံးတတ်တယ် ခေါင်းညိတ်တတ်တယ်
44. တို့ဘက်က ကြည့်တော့ သူရဲကောင်း ၊ သူတို့ဘက်က ကြည့်တော့ သစ္စာဖောက်
45. မနိုင်၍ သည်းခံရခြင်းသည် လည်းကောင်း
46. လေတိုက်လို့ သစ်ပင်လှုပ်တာ၊ သစ်ပင်လှုပ်လို့ လေတိုက်တာ
47. ကောင်းပြီဆို ခံရပြီသာမှတ်
48. ဝက်လူးကျေးရွာသွား တောလား
49. မိန်းမရှားသလား ဟုတ်စ
50. ကျောက်စရစ်တော မာခေါင်ခေါင်မှာ အတောင်ကျွတ်သော ကြိုးကြာရေရှာ၍ မရသကဲ့သို့
51. မုန့်လုံးစက္ကူကပ် ဇာတ်လမ်း
52. အိပ်ကောင်းခြင်းလည်း မအိပ်ရ (နုနုရည် အင်းဝ ၏ တက်ကျိုးတော့ လက်ထိုးလှော်မယ် နှင့် ပူးတွဲ)
53. လက်ညှိုးညွန်ရာ လိုရာဖြစ်စေ
54. ဘိုကေတစ်ထောင်မှာ တယောက်လောက်တော့
Filed under Book, Novel
Tagged as Book, Novel
March 15, 2013 · 7:11 pm
စစ်မြေပြင် လက်စွဲကျမ်း (၁၉၅၈) – မာတိကာ
မြန်မာစစ်တပ်မှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ကြည်းတပ် လက်စွဲကျမ်း ဘာသာပြန် (၁၉၅၈) မာတိကာပါ။
Filed under Book, Military Affairs
Tagged as Book, Military Affairs